Indonezia: Mpilalao Diso Fotoana Tamin’ny Fanombohany Ny Lalao Olaimpka · Global Voices teny Malagasy
Indonezia: Mpilalao Diso Fotoana Tamin'ny Fanombohany Ny Lalao Olaimpka
Voadika ny 11 Aogositra 2012 5:15 GMT
Ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny lalao Olaimpika 2012 atao any Londona ity.
Amin'ny mponina miisa 220 tapitrisa, mpifaninana 22 fotsiny no nalefan'ny Indonezia hifaninana amin'ny taranja ara-panatanjahantena fito atao amin'ny lalao Olaimpika any Londona 2012 . Voatsikera ny isan'io solontena io rehefa nambara fa mpiandraikitra ara-panatanjahantena 54 koa, izay avo roa heny amin'ny isan'ny mpilalao, no manatrika ireo lalao.
Diaz Kusumawardani, 16 taona, iray amin'ireo mpilalao Indoneziana tanora indrindra no hifaninana amin'ny tifitra 10 metatra sokajy vehivavy. Nahazo ny karatra ho any amin'ny lalao Olaimpika i Diaz rehefa nahatratra ny isa 388 fetra ilaina tamin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Azia amin'ny tifitra tany Doha, Qatar, ny volana Janoary teo, ary noheverina ho efa vonona ny hiatrika ny lalao Olaimpika ataony voalohany any Londona izy.
Niala aloha tamin'ny filaharana nandritra ny lanonam-panokafana aza izy noho ny fotoan-dehibeny.
Atleta Indoneziana Diaz Kusumawardani. Sary avy amin'ny pejin'ny twitter an'i Diaz
Nefa rava ilay fiomanany ny ampitso maraina, araka ny bitsika tao amin'ny kaontiny manokana amin'ny Twitter. Toa hoe, ny mpanazatra azy no niteny taminy fa manomboka amin'ny 9 ora maraina ny fifaninanana. Rehefa tonga teny an-toerana, Royal Artillery Barracks, izy ireo dia nahita fa efa nanomboka tamin'ny 8 ora sy 15mn maraina ny fifaninanana ary ny atleta sasany efa manomana ny fitaovany sahady.
Hazavainy ao amin'ny kaontiny amin'ny Twitter ilay rotoroto vao maraina : [Id]
@diazdkw: Goavana, diso fotoana ary tsy nahatratra ny vokatra farany ambony tokony ho tratrarina.
@diazdkw: Iza no niteny fa manomboka amin'ny 9 maraina ny fifaninanana? Nanatrika ny fivoriana ara-teknika ve ianareo ?
@diazdkw: Amin'ny manaraka, mba ialao azafady io hadisoana adaladala io.Tsy maintsy mahalala ny ora marina hahatongavany eny amin'ny toerana hanaovana ny fifaninanana ny mpanazatra sy ny mpifaninana. Tandremo ny tsy fahazoan-dresaka ary mba manaova zavatra matihanina kokoa .
Amin'ny mpifaninana 56, Diaz no alohan'ny farany. Ny tsikerany sy ilay olana dia nanjary resa-be teo amin'ny haino aman-jery mahazatra sy media sosialy.
@zenrs: Amin'ny fisian'ny mpiandraikitra betsaka noho ny mpilalao, dia tahaka izao ny toerantsika, diso fidirana ao amin'ny toerana hanaovana ny fifaninanana ny mpilalao. Inona no ataonareo ao ry mpiandraikitra ?
@AyuWidy: Diaz Kusuma no hany mpilalao Indoneziana amin'ny tifitra, nefa diso fidirana tao amin'ny toerana hifaninanana izy. Dia tena mifandray marina amin'ny famoahana ny kolontsaintsika amin'ny famehezana ny fotoana. Mahatalanjona ianareo!
@ayshardzn Diaz Kusuma, Indoneziana voalohany mifaninana any Londona (Tifitra) tara adiny iray ny fahatongavany tao amin'ny toerana filalaovana. Faha 55 amin'ny 56. Tara adiny iray ! #London2012
@khalidolit: Diaz Kusuma, mpilalao amin'ny tifitra, tara ora iray tao amin'ny toerana hifaninanana. Satria ny hadisoam-potoana dia kolontsain'ny firenentsika.
Ny alatsinainy teo, nampiasain'i Diaz indray ny twitter hanazavany fa tsy adin'ny iray taorian'ny fifaninanana izy vao tonga fa vao hanomboka ny fifaninanana no tonga izy.
@diazdkw: Tiako hamafisina, tsy tonga adin'ny iray taoriana tany amin'ny RAB [ny toerana hanaovana ny fifaninanana] aho. Miangavy aza ankalazaina izany.
@diazdkw: Tsy tezitra na manameloka na iza na iza aho ny amin'izay vitako omaly fa miangavy ny olona mba tsy hankalaza izany.
Medaly volamena enina no voaangon'i Indonezia teo amin'ny tantaran'ny lalao Olaimpika, izay avy amin'ny taranja badminton avokoa.
Ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay amin'ny lalao Olaimpika 2012 atao any Londona ity.